Maxaa keenay in xubno kasoo jeeda Hawiye ay isku sharaxaan guddoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Maxaa keenay in xubno kasoo jeeda Hawiye ay isku sharaxaan guddoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka
Musharixiinta sanadkaan isku soo sharaxday xilka guddoomiye ku-xigeenka baarlamaanka cusub ee Soomaaliya ayaa ah kuwii ugu badnaa ebed, kadib markii ay is diiwaan geliyeen tiro ka badan tiradii hore isku diiwaan gelin jirtay.
Guddiga doorashada ee guddoonka baarlamaanka Soomaaliya ayaa shaaciyay magacyada 12 musharax oo u taagan xilkaan, kuwaas oo ay ku jiraan xubno kasoo jeeda beesha Hawiye, taas oo su’aalo badan ay ka taagan tahay, sida ay xilkaan rajada uga qabaan.
Xildhibaanada kasoo jeeda beesha Hawiye islamarkaana isku sharaxday jagada guddoomiye ku-xigeenka baarlamaanka Soomaaliya ayaa waxaa ka mid ah, C/weli Maxamed Qanyare Afrax, C/laahi Goodax Barre, waxayna arrintaan ka dambeysay kadib markii khal-khal uu ku yimid nidaamkii awood qeybsiga beelaha waaweyn ee baarlamaanka.
Dhinaca kale, beesha Dir ayaa iyadane rajo aad u weyn ka qabta inay ku guuleystaan guddoomiyaha Aqalka Sare ee baarlamaanka Soomaaliya.
Beesha Dir ayaa la sheegayaa inay tiro ahaan ku badan yihiin qeybsiga xildhibaanada labada Aqal ee baarlamaanka Soomaaliya. taasoo u saamixi karta inay xilkaan ku guuleystaan.